Ngaba uyasazi isicelo seNcwadi? | Uncwadi lwangoku
Sele uyazi ukuba yeyiphi inoveli kwintengiso yoncwadi ethiwe thaca, into entsha esikukhathaleleyo ukuba sikuphathele yona… Okwangoku kukho izicelo ezimbalwa ezisinika iincwadi kunye neencwadi zokumamela ngexabiso elincinci, kodwa namhlanje sikuphathela enye. Ngaba uyasazi isicelo Incwadi yeencwadi? Ukuba akunjalo, hlala ufunde eli nqaku kwaye ufumane iinkcukacha ngendlela elisebenza ngayo.
1 Yintoni i 'Bookchoice' kwaye isebenza njani?
1.1 Zeziphi iingenelo esizifumanayo?
1.2 Iingxaki eziphambili
Yintoni i 'Bookchoice' kwaye isebenza njani?
Incwadi yokubhukisha sisicelo sewebhu esithi, phantsi kobhaliso, sinoxanduva lokubonelela ngezi zibonelelo zilandelayo ngenyanga:
Iincwadi ze-8 ezintsha kunye neencwadi zokumamela inyanga nenyanga.
Abathengisi abathengisayo nobuncwane obufihliweyo ehlabathini lonke.
Unako ukuba nazo zonke zifumaneke kwi app ngeNcwadi.
Kwaye ekugqibeleni, uya kuba nazo zonke iincwadi ezikhoyo unyaka omnye.
Zeziphi iingenelo esizifumanayo?
Olona ncedo luphambili esisifumana kwesi sicelo kukuba isigcina sinolwazi oluphezulu ngokubhala. Ukuba nencwadi ekhutshelweyo okanye incwadi yeaudio kwithebhulethi okanye kwiselfowuni yakho kuthetha ukuba singayifumana nangaliphi na ixesha elinexesha elincinci lokufunda.
Olunye uncedo olucacileyo kukuba lusizisela iindaba ukuba mhlawumbi kwivenkile yeencwadi okanye ngokwethu ngekhe siyifumane, ngababhali abaziwayo kancinci okanye abapapashi abaziwayo.
Ine a Ixabiso elifanelekileyo: I-3'99 i-euro ngenyanga Iincwadi ze-8 kunye neencwadi ezisibhozo zokumamela.
Eyona mpazamo iphambili siyibonayo kukuba nangona inexabiso elinokufikeleleka, ekuphela kwendlela yokuhlawula kukuhlawula i- Iinyanga ze12 kwi umrhumo kuphela, oko kukuthi, 47.88 i-euro ngonyaka. Yeyiphi engonelisekanga kwaphela kubafundi abanezixhobo zemali ezimbalwa.
Eli nqaku linokwenza abafundi basincame esi sicelo kwaye bajonge ezinye ezifikelelekayo ngakumbi okanye ngeendlela zokuhlawula ngokulula.
Kwaye kuwe, ucinga ntoni ngale ncwadi? Ubumazi? Ngaba ungayihlawula loo mali yonyaka ngeencwadi ze-8 kunye neencwadi zokumamela ngenyanga? Okanye, ngokuchaseneyo, ngaba ucinga ukuba kukho ukusetyenziswa kweencwadi ngoku okungcono kunale?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ngaba uyasazi isicelo seNcwadi?